काजु किन खाने? डा: ओम मुर्ति – Interview Nepal
काजु किन खाने? डा: ओम मुर्ति
काठमाण्डौ , पुस ९ । ड्राइ फ्रुटलाई स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ ।
ड्राइ फ्रुटमा प्रसस्त एन्टीअक्सिडेण्ट पाइन्छ, जसले रोग निरोधक क्षमता बढाउँछ । ड्राइ फ्रुटले हृदयघात तथा अन्य रोगहरुबाट बचाउँछ । तर यस्ता ड्राइ फ्रुटमा क्यालोरी पनि धेरै भएकोले धेरै खाएमा तौल बढ्न सक्छ र यसले बेफाइदा पनि गर्नसक्छ ।
ड्राइ फ्रुटमा कार्बोहाइड्रेट थोरै र प्रोटिन बढी पाइने भएकाले मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुरोगीहरुको लागि फाइदाजनक मानिन्छ ।
काजु को फाईदा :
काजुले मुटुलाई फाइदा गर्छ । हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ । काजुमा पाइने श्भबहबलतजष्ल रसायनले आँखालाई स्वस्थ बनाइ राख्छ ।
तर यसमा बढी मात्रामा क्यालोरी पाइने हुनाले एक दिनमा ५ देखि १० वटा ९पिस भन्दा बढी खानु हुँदैन । यसमा क्यमष्ग को मात्रा बढी हुनाले उच्च रक्तचापको बिरामीले पनि यो धेरै खानु हुदैन । अरु ड्राइफ्रुटको तुलनामा काजुमा सैचुरेटेड बत बढी हुन्छ ।
यसमा भिटामिन ए, बी, सी र खनिज तत्वहरु पनि पाइन्छ ।
– डा। ओम मुर्ति अनिल, मुटुरोग विशेषज्ञ
Tagged काजु किन खाने?